Nhau dzeBhaibheri: Josefa Anoiswa Mutorongo - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Josefa anongova bedzi namakore 17 paanoburusirwa Egipita. Ikoko anotengeserwa munhu anonzi Potifari. Potifari anoshandira mambo weEgipita, anonzi Farao.
Josefa anoshandira tenzi wake nesimba, Potifari. Nokudaro apo Josefa anokura, Potifari anomuita mutarisiri weimba yake yose. Ko zvino, nei Josefa ari muno mutorongo? Imhaka yomudzimai waPotifari.
Josefa anokura kuva murume akatsvinda, mudzimai waPotifari anoda kuvata naye. Asi Josefa anoziva kuti kwakaipa, uye haangakuiti. Mudzimai waPotifari anotsamwa zvikuru. Nokudaro panouya murume wake kumba, anomurevera nhema achiti: ‘Josefa uya akashata aedza kuvata neni!’ Potifari anodavira mudzimai wake, uye anoshatirirwa Josefa kwazvo. Saka anoita kuti aiswe mutorongo.
Mutarisiri wetorongo anokurumidza kuona kuti Josefa munhu akanaka. Nokudaro anomuita mutarisiri wavamwe vasungwa vose. Gare gare Farao anoshatirirwa mudiri wake nomubiki wake, ndokuvapinza mutorongo. Humwe usiku vose vanorota hope chaidzo, asi havazivi revo yamaroto avo. Mangwana wacho Josefa anoti: ‘Ndiudzei maroto enyu.’ Uye pavanoita, Josefa, nebetsero yaMwari, anotsanangura revo yamaroto avo.
Kumudiri, Josefa anoti: ‘Mumazuva matatu uchabudiswa mutorongo, uye uchavazve mudiri waFarao.’ Nokudaro Josefa anowedzera kuti: ‘Paunobuda, udza Farao nezvangu, uye ndibetsere kubuda munzvimbo ino.’ Asi kumubiki, Josefa anoti: ‘Mumazuva matatu bedzi Farao achaita kuti musoro wako ugurwe.’
Mumazuva matatu kunoitika sokutaura kwaJosefa. Farao anoita kuti musoro womubiki ugurwe. Hunyanguvezvo, mudiri anobudiswa mutorongo ndokuvamba kubatirazve mambo. Asi mudiri anokanganwa nezvaJosefa! Haaudzi Farao nezvake, uye Josefa anotofanira kugara mutorongo.
Genesi 39:1-23; 40:1-23.
Josefa akura zvakadini paanoendeswa kuEgipita, uye chii chinoitika paanosvika ikoko?
Josefa anoguma ava mutorongo sei?
Josefa anopiwa basa rei mutorongo?
Mutorongo, Josefa anoitirei mudiri waFarao nomubiki wake?
Chii chinoitika pashure pokunge mudiri asunungurwa mutorongo?
Verenga Genesi 39:1-23.
Sezvo kwakanga kusina mutemo waMwari wakanyorwa waishora upombwe muzuva raJosefa, chii chakaita kuti atize mudzimai waPotifari? (Gen. 2:24; 20:3; 39:9)
Verenga Genesi 40:1-23.
Rondedzera muchidimbu hope dzomudiri uye dudziro iyo Jehovha akapa kuna Josefa. (Gen. 40:9-13)
Mubiki akarotei, uye zvairevei? (Gen. 40:16-19)
Muranda akatendeka, akangwara akatevedzera sei mafungiro aJosefa nhasi? (Gen. 40:8; Pis. 36:9; Joh. 17:17; Mab. 17:2, 3)
Genesi 40:20 inobatsira sei pamaonero anoita vaKristu kupemberera misi yokuzvarwa? (Mup. 7:1; Marko 6:21-28)
Potifari Kadhi reBhaibheri
Dhaunirodha kadhi iri romunhu womuBhaibheri wodzidza zvakawanda nezvaPotifari wokuIjipiti, tenzi waJosefa.